I-A3 Pen iphrinta ePhilippines China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta yePhrinta ye-Printer UV,Iphrinta yamanani wephrinta yephrinta eNdiya,Iphrinta yamanani wephrinta yephrinta
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta yephrinta > I-A3 Pen iphrinta ePhilippines
I-Shenzhen refinecolor ubuchwepheshe Co., LTD ivuselela iphinde ikhiphe iphrinta ehola i-UV kusukela ngo-2014. Sinekhwalithi ephezulu ye-UV Printer, i-Eco-Solvent Printer ne- A3 Pen Printer ePhilippines.
Iphrinta yephrinta Iphrinta ye-UV ingakwazi ukunyathelisa ngqo ku-Pens, Icingo lefoni, i-Metal, i-Glass, i-PVC, i-Wodd, i-Arcylic, Kwendwangu njll ...
Ukuphrinta ne-UV yethu kuholele iphrinta kuwubufakazi bokuqala, ukuqinisekiswa kwamanzi nokukhanya kwelanga.Ikhasimende lethu elivela kumazwe angaphezu kuka-200.
Izici eziwusizo zePhrinethi yoMshini wethu wephrinta yephrinta eNdiya RF-A3UV:
2. Iphrinta yomshini womshini wephrinta ingafakwa ngeSensor Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. I- A3 Pen Printer ePhilippines I- Ink Inkinobho yeNkinobho ineNenzwa yokuThola iNgeli, uma inkinobho iphelile kuyoba yinto ephazamisayo;
Iphrinta yePhrinta ye-Printer UV Iphrinta yamanani wephrinta yephrinta eNdiya Iphrinta yamanani wephrinta yephrinta Iphrinta ephrinti ye-Ricoh UV Iphrinta yephrinta i-Arduino Iphrinta yeThethini ye-Printer ye-T Shirt Iphrinta ephrinta engu-6090 UV Iphrinta ephrinti e-Efi